Ghimob malitere na Brazil ka malware lekwasịrị anya na ngwa akụ | Gam akporosis
Nwanyị na-arụ ọrụ na netwọk ụwa na nchekwa data
Ọ gaghị abụ nke ikpeazụ malware akpọ 'Ghimob' nke na-abịa metụtara gam akporo, ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị zuru oke ka anyị wee buru n'uche ebe anyị na-ebudata APKS maka ngwa na egwuregwu.
Ma ọ bụ ndị nche nchebe achọpụtala trojan ọhụrụ nwere ike nledo ma zuo ohi data site na 153 ngwa na gam akporo. Ihe omuma ohuru ohuru ohuru na Brazil nke na-agbasa mba si mba a.
Akpọrọ ya 'Ghimo', ihe niile yiri ka ọ na-egosi nke ahụ emeela otu otu 'Astaroth' malware (Guildma) na Windows. Kaspersky bụ ụlọ ọrụ siri ike na mbipụta nke nchọta nke na-etinye anyị ọzọ tupu ọkwa nke mbido nke APKs nke ngwa na egwuregwu nke anyị wụnye.
Kaspersky azọrọ na e nyela Trojan gam akporo ọhụrụ site na nchịkọta ihe eji ebudata achọpụtara n'ime ngwa gam akporo dị egwu na weebụsaịtị na sava ndị Astaroth jibu.
Ee, ọ dịbeghị mgbe ọ bụla achọpụtara na ngwa ọ bụla ejiri rụọ ọrụ site na ụlọ ahịa gọọmentị Ngwa Google Play na egwuregwu, yabụ ọ bụrụ na ị wụnye ha niile site na isi mmalite a, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ihe ọ bụla.
Ghimob na-eji ozi ịntanetị na saịtị ọjọọ emegharị ndị ọrụ na saịtị ndị ahụ ebe a na-akwalite ngwa ndị a "oria". N'ezie, ha "nwoghara onwe ha" dị ka a ga - asị na ha bụ ngwa Google na aha dika Google Defender, WhatsApp Updater ma obu Flash Update. Ọ bụrụ n ’ihe kpatara anyị dabara n’ọnyà ahụ, nsogbu ahụ dị n’inye ngwa ndị a ikikere nnweta ọrụ, usoro ikpeazụ na usoro“ nje ”.
Na ngwaọrụ oria, ọ bụla nke ngwa ndị ahụ ga-achọ na ndepụta nke 153 iji gosipụta peeji ndị adịgboroja nke logins ma si otú ahụ zuo nzere. Na eziokwu na ngwa niile achọpụtara agbadoro ụlọ akụ Brazil iji zuo ohi data mgbe ị na-eji ngwa mkpanaka ndị ahụ.
Kaspersky ekwuola na ọ bụghị naanị na ha na-anọ na ụlọ akụ BrazilKama nke ahụ, Ghimob ejiri ngwa 5 gbasaa na Germany, Portugal yana ngwa 3, Peru nwere abụọ, Paraguay na 2 ọzọ, yana Angola na Mozambique na mba ọzọ na mba ọ bụla.
Ya mere, anyị na-etinye mara banyere weebụsaịtị ndị ahụ na-enye nbudata ngwa APK (ọ bụghị ihe niile, dị ka APKMirror bara uru), iji lekwasị anya nke ọma ihe ngwa anyị na-ebudata na maka ihe, n'ihi na ha na-ebu ihe egwu nke nile di iche iche nke malware.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » New 'Ghimob' malware na-elekwasị anya na ngwa ngwa akụ
Firefox Lockwise bụ ezigbo njikwa paswọọdụ echekwara
Xiaomi Mi 11 pụtara na GeekBench na-egosi arụmọrụ ya dị elu